Noho Ny Firoboroboan’ny Fandidiana Orona, Hanjavona Ve Ny Orona Armeniana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2017 14:15 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, عربي, Français, English
Ny sarivongan’ ilay mpamoron-kira tamin'ny andron'ny Sovietika-Arno Babajanyan, fantatra amin'ny orony Armeniana, ao ambadika kosa ny sainam-pirenena Ameniana. Sary: Iris Molenaar ho an'ny Eurasianet.et.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa avy amin'ny EurasiaNet.org, nosoratan'i Iris Molenaar. Navoaka indray rehefa nahazoana alalana.
Ny orona Armeniana dia loharanom-pireharehan'ny firenena, indraindray lazaina toy ny tendrombohitra mahagaga ao amin'ny firenena: rehareha lehibe, sy manaja.
Saingy ny lazaina fa tsara amin'ny tontolon'ny sary hosodoko dia tsy voatery hihaona amin'ny fenitry ny hatsarana ankehitriny. Ary mihamitombo ny Armeniana – indrindra ny vehivavy tanora – misafidy ny fandidiana orona mba hifanaraka amin'ny fijery Tandrefana natao idealy.
“Amin'ny maha-firenena, miezaka ny ho Tandrefana izahay, ary mihatra amin'ny fenitry ny hatsaran-tarehy ihany koa izany,” hoy i Kristina Grigoryan, izay nanao fandidiana plastika tao Yerevan nandritra ny 16 taona. “Mbola mirehareha izahay amin'ny maha Armenianina, fa tsy dia mirehareha loatra manana endri-javatra tahaka izany.”
Tsy manana antontan'isa momba izany i Armenia, saingy milaza ny porofo ara-tantara fa lasa miha-malaza ny fomba (fandidiana orona): Manatontosa asa 500 mifandraika amin'ny orona ny toeram-pitsaboana Grigoryan isan-taona, manombka amin'ny 150 hatramin'ny 200 kosa dimy taona lasa izay, hoy izy, ary miha betsaka ireo toeram-pitsaboana manatontosa ny fandidiana.
Mety hoe fahiny ny orona Armeniana, saingy ny asa momba ny orona Armeniana dia fanavaozana vao haingana. Ao amin'ny Firaisana Sovietika, ny fandidiana ho amin'ny hatsaran-tarehy namboarina dia voafetra ihany ho amin'ny toe-javatra mila fanamboarana indray. Nampiroborobo ny fangatahana fandidiana plastika ho an'ny fanamboarana indray ny horohoron-tany goavana tao Armenia tamin'ny taona 1988, traikefa izay nohararaotin'ireo dokotera avy eo mba ho tafiditra amin'ny fandraharahana fandidiana tarehy. “Izay no niandohan'ny fandidiana plastika niroborobo tao Armenia,” hoy i Karen Danielyan, mpandidy ho amin'ny hatsaran-tarehy namboarina ao Yerevan. “Ary ny fandidiana orona ankehitriny no malaza indrindra sy be mpanao indrindra ao Armenia – fandidiana orona avokoa ny telo amin’ ireo fandidiana efatra.”
Iray amin'ireo lohalaharana amin'ny fandidiana orona ao Armenia i Danielyan: tamin'ny taona 2002, nanomboka ny fifaninanana “Orona Tena Armeniana Indrindra” izy, ka ny loka voalohany dia fandidiana orona maimaim-poana avy amin'ity dokotera ity ihany. Tamin'izany fotoana izany, hoy izy: dokambarotra natao hampandeha ny asa ny fifaninanana. Ankehitriny, tsy ilaina intsony ny manao fanentanana momba izany. Notombanany ho fandidiana orona tokony ho 1500 isan-taona no ataony, saingy miankina tanteraka amin'ny toetry ny toe-karena ny tarehimarika.
«Raha ratsy ny toe-draharaha ara-toekarena, vitsy ny fandidiana; Raha tsara ny toe-draharaha ara-toekarena, marobe ny fandidiana», hoy izy. Nisy fiantraikany ratsy ny fitontongan'ny toekarena vao haingana, hoy izy, “Tsy fotoana tsara ho an'i Armenia izao. Tsy tsara mihitsy ny toe-draharaha ara-toekarena, ka vitsy ny olona manao fandidiana.
Saingy tsy ireo olom-pirenena Armeniana ihany no manova orona ao Armenia. Nanamora ny firoboroboan'ny fizahan-tany ara-pitsaboana, indrindra indrindra avy amin'ny fangatahana fandidiana hanatsarana endrika sy bika ny fotodrafitrasa mandroso sy ny sarany mora (raha oharina amin'ny Tandrefana). Nanambara i Raffi Elliott, Tale Jeneraly sy mpiara-manorina ny orinasa fitetezam-paritra ho an'ny fitsaboana, gettreated.co, fa ny mpanjifany am-pielezana (diaspora) Armeniana dia tonga hanao fandidiana orona.
Ho an'ny firenena manana fahatsapana rehareha lehibe sy fiavaham-pirenena, ny lamaody manao “orona Armeniana” tsy dia Armeniana dia hita fa toa mifanohitra. Nilaza i Danielyan manana orona manetry tena fa tato ho ato, te-hanana orona mifanaraka amin'ny endrik'izy ireo kokoa ny olona, fa tsy maka tahaka fotsiny ny orona kely malaza, mivilana sy Slavika. Na izany aza, manohy mahazo fangatahana marobe mba hanao toy ny oron'i Angelina Jolie izy, ohatra amin'ny olo-malaza indrindra raha resaka fandidiana orona no resahana.
Noho ny fandidiana orona lasa miha-mora idirana, ekena, sy malaza kokoa, misy loza ateraky ny fanjavonan'ny “orona Armeniana” ve? Nihomehy i Danielyan ary nahatsiaro fanontaniana iray azony tamin'ny mpanjifany: “Rehefa vita ny oroko, handova ny oroko vaovao ve ny zanako?”
Tsy misy fiantraikany amin'ny fototarazo ny fandidiana orona, mazava ho azy, tsy hiova mihitsy ny toetoetry ny endrika, hoy izy nanazava.
Naneho ny fanajany ny endri-javatra mampiavaka i Elliott, mpandraharaha momba ny fizahan-tany ara-pitsaboana: “Tiako ny orona Armeniana. Manome toetra [iavahana]. “
Manohitra ity zavatra malaza ity kosa ny vehivavy Armeniana sasany: Nandiso ireo tsaho tamin'ny gazety mpanaitaitra iray ilay mpihira malaza, Silva Hakobyan, tsaho milaza fa mikasa hampihena ny orony somary Armeniana izy, nilaza izy fa mirehareha amin'ny endriny voajanahary.
Mbola maro ireo vehivavy miahiahy fa ny endrika tena Armeniana dia mety hanimba ny vinavinan'izy ireo hanambady, hoy i Danielyan nanamarika fa ny tena antony mahazatra lazain'ireo mpanjifany dia ny faniriany hitady sakaiza. “Raha manana orona lehibe ianao, dia tsy hahita vady, ary raha tsy manambady ianao, dia tsy tsara izany,” hoy izy..
Nilaza i Rouben Abrahamyan, mpandresy tamin'ny fifaninanana fampahafantarana “Orona Armeniana Indrindra” – sy lehilahy mpandray anjara tokana tamin'ny fifaninanana fa mbola mahatsiaro ratsy noho ny mpifaninana taminy izy. “Tsara tarehy loatra izy, saingy nanimba ny endriny ny orony ngezabe,” hoy i Abrahamyan, mpanao gazety sady mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ao Yerevan. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana izy satria nisy ratra ny orony izay niteraka olana ara-pisefoana, ary faly fa afaka izany. Na izany aza, hoy izy: “Tsapako tiako ho eo amin'ny toerako izy, amin'izay nanana orona tsara kokoa. Raha ny tamiko, fitsaboana fotsiny ny ahy, ary ho tsara endrika kokoa izy miaraka amin'ny orona kelikely. “